KStars yakanakisa stellarium-senge nyeredzi app | Linux Vakapindwa muropa
KStars is a multiplatform astronomy software iyo inoteedzera iyo planetarium. Icho chikamu che KDE. Inobvumidzwa pasi pemitemo yeGPL, KStars isoftware yemahara. Inopa yakajeka graphical simulation yedenga rehusiku, kubva chero kupi paPasi, chero zuva uye nguva.
Inosanganisira zvinopfuura nyeredzi zana nemakumi matatu, zviuru gumi nezvitatu zvemuchadenga zvinhu, mapoka enyeredzi makumi masere nemasere, zviuru zvemakometi uye maasteroid, pamwe nemapuraneti masere eSolar System, Zuva neMwedzi.
Kune rimwe divi, iyo inopa ruzivo rwakawanda nezve zvese stellar zvinhu muchimiro chehypertext. Iyo zvakare inobvumidza kudzora teresikopu uye CCD makamera kubva kuchirongwa chaiko.
Zvekuverenga nyeredzi, Astrocalculator inogona kushandiswa kufanotaura zvibatanidzo, kuora kwemwedzi, uye kuita akawanda akajairwa masvomhu.
1 Nezve KStars
2 Maitiro ekuisa KStars?
Iyi software yekuongorora nyeredzi Iyo ine akati wandei anonakidza maficha pakati atinogona kuratidza.
Chinja nzvimbo yako kuti uone kuti maonero ako wedenga anochinja sei nenharaunda.
Iyo inobvumidza mushandisi kuti aone uye anzwisise mutsauko uripo pakati pemazuva eseresi nemazuva ezuva nekushandura kumhanya kwekufananidza.
Ongorora marongero ehurongwa nekuchinja pakati penzvimbo dzekonetera uye dzakatwasuka. Uye zvakare, kurongedza kushandurwa kunogona kuitwa muKStars Astrocalculator.
Unganidzo nzira kumapuraneti uye woisa simulation mwero kuti uone avo trajectories.
Kugona kwekugona kuseta iyo nguva mune ramangwana riri kure kuti uone kuti mapoka enyeredzi anochinja sei chimiro nekuda kwekufamba kweredzi.
Chengetedza nzvimbo yako yekuongorora uchishandisa KStars 'yakakura rutsigiro rweyeredzi yezvinhu
Tichakwanisa kuwana software iyi kushandurirwa mumitauro yakawanda. Iwe unongofanirwa kutsvaga iyo iyo imwe neimwe yaanoda mukati megadziriro dzechirongwa.
Chirongwa ichi chinoratidza mazwi ehunyanzvi anozoiswa pasi pebhuruu. Kana ivo vakadzvanywa, isu tichawana tsananguro.
Izvo zvinobvumidza vashandisi kudzidza nezve astronomy uye astrophysics kuburikidza neiyo AstroInfo chirongwa (chikamu cheKStars Chinyorwa chinowanikwa kuburikidza neMenyu yekubatsira).
Ekos inyanzvi yekuongorora nyeredzi, yakakwana yekuongorora nyeredzi iyoInogona kudzora ese maIndI zvishandiso, kusanganisira akawanda materesikopu, maCCDs, maDSLR, anotarisa, mafirita, uye zvimwe zvakawanda.
Ekos inotsigira yepamusoro-chaiyo yekutevera uchishandisa online uye isingaite astrometry resolution, autofocus uye auto-nhungamiro kugona, uye imwechete kana yakawanda mifananidzo kutora uchishandisa ine simba yakavakirwa-mukati kuteedzana maneja.
KStars yakave yakarongedzwa neakawanda Linux / BSD migove, kusanganisira Red Hat Linux, OpenSUSE, Mandriva Linux uye Debian saka kuisirwa kwaro mukuparadzira kwakawanda kunobva kuzvitoro zvavo.
Maitiro ekuisa KStars?
Kune avo vanofarira kugona kuisa ichi chishandiso pane yavo Linux kugovera, Unogona kuzviita nekutevera rairo dzatinogovana newe pazasi.
Kana ivo vari vashandisi veUbuntu, Linux Mint kana kugovera kunobva pane izvi, ivo vanogona kuwedzera iyo yekushandisa repository nekuvhura terminal uye nekuita unotevera kuraira mairi:
Iye zvino tava kuzovandudza yedu package package ne:
Uye pakupedzisira isu tichaenderera mberi nekuisa iko kunyorera pane yedu system ne:
Yenyaya yeavo vashandisi veDebian kana chero kugoverwa kunoenderana neizvi (senge Deppin OS) mune chinongedzo ivo vanongofanirwa kuita unotevera kuraira:
Zvino kune chero ani Vashandisi veArch Linux, Manjaro, Antergos kana chero kugoverwa kweLinux kunoenderana neArch Linux. Ivo vanozogona kuisa kstars kubva kuArch Linux repositories.
Ivo chete vanofanirwa kuvhura terminal uye pairi ivo vanonyora unotevera kuraira kuti vaite iyo yekuisa:
sudo pacman -S kstars
Vashandisi chero vhezheni yeOpenSUSE vanozokwanisa kuisa kstars zvakananga kubva kune chinongedzo nekuita unotevera kuraira mairi:
sudo zypper in kstars
Pakupedzisira, kune chero ani Vashandisi veFedora kana chero distro yakavakirwa pairi, vanogona kuisa nemirairo inotevera:
sudo yum install kdeedu-kstars
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » KStars yakanakisa stellarium-senge nyeredzi app
Alibaba inoburitsa yakavhurwa sosi yayo Dragonwell 8.0 tsika JDK